Golaha La -talinta | Sapsa
Ma jeclaan lahayd inaad wax badan ka barto sida go'aannada looga gaaro dugsigeenna?
Ma jeceshahay fursad aad ku dhiibato talo iyo ra'yi ku saabsan go'aannadan?
Ma rabtaa inaad wax dheeraad ah ka ogaato sida SAP u dhexgalo oo ay u saameyso qorshooyinka degmo dugsiyeedka ballaadhan iyo bulshada?
Ma rabtaa fursad aad kula xiriirto waalidiinta kale oo aad uga shaqeyso hagaajinta dugsigeenna dhammaan ardayda?
Golaha La-talinta ayaa ah meesha adiga kugu habboon!
Golaha La-talinta ee Dugsiga Hoose ee Saint Anthony Park waa koox ka kooban waalidiin danaynaysa, ilaaliyayaasha, macallimiinta, iyo xubnaha bulshada oo la kulma Dr. Duke bishiiba mar si ay u maqlaan cusboonaysiinta arrimaha la xiriira manhajka, shaqaalaha, miisaaniyadda, iyo waxqabadyada manhajka ka baxsan, si loogu magac daro. wax yaroo. Golaha La-talinta ayaa fursad u leh inay bixiyaan jawaab celin, weydiiyaan su'aalo, iyo qaabeynta mudnaanta dugsiga. Goluhu sidoo kale waxaa ka go'an inuu xoojiyo matalaadda SAP ee golayaasha kaladuwan ee latalinta waalidiinta.
Ku soo biir Golaha La-talinta si ay nooga caawiso inaan u fikirno hal-abuur iyo si xeel dheer oo ku saabsan sida aan ula kulmi karno caqabadaha gaarka ah ee keenay sannad-dugsiyeedkan aan caadiga ahayn si loo hubiyo in DHAMMAAN ardayda, qoysaska, iyo shaqaalaha SAP ay dareemaan taageero. Qof kasta waa lagu soo dhaweynayaa inuu ku biiro mana jirto ballanqaad rasmi ah ama geeddi-socod doorasho. Waxaan rajeyneynaa matalaad balaaran sanadkaan sidaa darteed waxaan hubin karnaa inaan tixgalino baahiyaha qoys walba oo Wolf Pack ah.
Si loogu daro liistada boostada oo aad u hesho cusbooneysiin ku saabsan taariikhaha / waqtiyada kulanka iyo waxyaabaha ajandaha ah, fadlan emayl u dir Advisory@sapsamn.org.
Golaha La-talinta ayaa caadiyan kulma Talaadada labaad ee bil kasta 5:00. Ilaa ogeysiis dheeri ah, dhammaan kulammada waxaa lagu qaban doonaa Zoom, iyada oo ikhtiyaar u ah dhinacyada xiisaynaya inay soo wacaan iyagoo isticmaalaya lambar taleefan oo caadi ah.
Kulamada Golaha Latalinta ee soo socda
Talaado, Maarso 9, 2021 5 galabnimo
iyada oo loo marayo Zoom
Daqiiqadaha Shirka Golaha La-talinta
Sideen uga qayb qaadan karaa?
Ka qaybgal dhacdooyinka
Ka soo qaybgal kulanka SAPSA ama Golaha latalinta
-Tabarucid dhacdo ama guddi
-Nala wadaag fikradahaaga!